umphetho » 🥾 Bona futhi wenze » 👟 Imisebenzi » U-Andra Ukuhamba » IStora Järnforsenleden
EJärnforsen, kunenethiwekhi ephelele yemizila yokuhamba intaba enhle, yonke iqala khona kanye ngaphandle komphakathi. Ekuqaleni kunendawo yokosa inyama, indawo yokupaka kanye nendlu yangasese, futhi nalapha kuqala umzila wokuzivocavoca nemizila enqamula ezweni yokushushuluza.
Umzila obomvu mude kakhulu eJärnforsen futhi kukuthatha cishe amahora angama-4-5 ukuzwa futhi cishe u-12 km ubude. Umzila omuhle kakhulu futhi ohlukahlukene wokuhamba izintaba kuwe, ofuna ukuhamba umzila oyindilinga bese uhlangabezana nezimanga eziningi. Kuningi phezulu naphansi, kepha uzoklonyeliswa ngokubukwa okuhle, imihosha emisha nemigwaqo emihle yamanzi. Emzileni we-trail kukhona ama-windbreaks ongama kuwo futhi usebenzise ubusuku kulabo abafisa.
Ekuqaleni kunendawo yokupaka, indlu yangasese, indawo yokuhlala, indawo yokosa inyama
EVensjön kunendawo yokuphefumula kanye ne-barbecue
Ungapaka futhi eduze nomhume waseLasse Maja bese uqala ukunyuka kwakho lapho!
IStora Järnforsenleden eGaia
IStora Järnforsenleden kuHiking Project
IStora Järnforsenleden e-Outdooractive
IStora Järnforsenleden Kumephu Yemvelo
IStora Järnforsenleden ku-Wikiloc